ကလိုစေးထူး: သတိ... ကူးစက်တတ်သည်။
စင်္ကာပူမှာတော့…..“နိုးလား…နိုးနိုး No lah, no, no” ဆိုတာမျိုး၊
“သင့်ခ်ယူး ဟာ, thank you huh” ဆိုတာမျိုးတွေ ခေတ်စားသဗျ။ ဒါပေမယ့် ဗမာတွေအချင်းချင်းတော့ ပြောခဲပါတယ်။
Jul 28, 2008, 10:48:00 PM
အဲ့လိုကြီးလား ဒီမှာလည်း ရှိတော့ ရှိတယ် အဲ့လောက်တော့ မဆိုးပါဘူးး ဘိုလိုမပြောရတာလည်း ပါမယ်ထင်တယ်း)
စင်္ကာပူမှာ တော့ကိုပေါပြောသလိုပဲ
Jul 28, 2008, 11:15:00 PM
ဟုတ်တယ်… မြန်မာတွေက လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်တယ်ပြောမလား၊ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ပြောင်းလဲတတ်တာကတော့ မြန်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အတုခိုးရင်လည်း ကိုယ်အတုခိုးတာ ဘာလဲဆိုတာသိရင်ပြီးတာပါပဲ။ ဒီမှာလည်း ok loh, no lah, maken (al)ready? (have you eaten?) ဆိုတာကတော့ မြန်မာပြည်က ရောက်ပြီးမကြာခင် ပြောကြတော့တာပါပဲ။
ဒေသခံတွေရဲ့အသုံးကို သိသလို ဘယ်လို စနစ်တကျပြောရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သိနေပြီး သုံးတတ်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
Jul 29, 2008, 12:59:00 AM
Yes, we also use umm..hmm in England,I think,
But I feel we only use it
:when we cant find no better words or
:when we are just waiting the full story ofaspeaker
:when we dont fully agree with what he or she is talking and we dont want to agrue.
Otherwise, no need to use it.
umm..hmm should not replace "yes" basically I think.
Jul 29, 2008, 2:03:00 AM
ဟားဟား အမ်ဟမ်း ကြီးကို တနေ့အခါသုံးထောင်လောက်ကြားရလွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်နေကျ။
ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ခဏခဏကြီးကြားနေရတော့ တမျိုးကြီးဗျ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော ကူးစက်နေပီလားလို့ ပြန်မေးကြည့်မိတယ်။ ဖြေပုံလေးက သင်းသဗျ။
"အမ်ဟမ်း" တဲ့ :P
Jul 29, 2008, 2:08:00 PM
ဒီမှာလဲ ပြောကြတယ်။ "အဲ---တို---- အဲ---တို e-- to--"နဲ့ စကားပြောရင်း စကားစပြတ်မသွားအောင်ရယ်၊ စဉ်းစားနေတုန်း ပါးစပ်က တခုခုကိုပြောနေရင် အဲလို အသံတွေ ဆက်တိုက်ဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက "ကျနော်တို့ ဒီ---"ဆိုတာမျိုး "ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်"လိုမျိုး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ :D
Jul 29, 2008, 11:01:00 PM
ကိုစေးထူးရေ… ဒီမှာတော့ Singalish လို့ ခေါ်တဲ့ this one lah… ok or not… u huh… no lah… ဘာသာစကားက မသိမသာကူးစက်တာ… အမ်ဟမ်း အတိ်ုင်းပဲ…
Jul 29, 2008, 11:35:00 PM
ဟိဟိ ကိုပေါတို့တန်ခူးတို့ပီတိတို့ ပြောသလိုပဲ ။ မလေးမှာလဲ တူတူဘဲ lah နဲ့ တlah ထဲ lah နေကြတာ။ ကိုယ်တိုင်လဲ သတိထားရင်က အကျင့်ပါပါနေလို့။ like this lah ? no problem lah. ok lah .အခုတော့ အမ်းဟမ်းဘက်လှည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
Jul 30, 2008, 12:31:00 AM
`အမ်ဟမ်း´ ... lah ? ...
Jul 30, 2008, 4:49:00 AM
တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ အဲဒါမျိုးတွေ အများကြီးပဲ။
အသဲယားလွန်းလို့ ကျလိကျလိတောင် ဖြစ်တယ်။
Jul 30, 2008, 2:20:00 PM
ကိုစေးထူး ထောက်ပြတာ တကယ်ထိတာပဲ။ ဟုတ်တယ်နော် လူတွေ ပြောကြတယ်။ ဒီဖက်မှာတော့ သိပ်မကြားရဘူး။ မြန်မာနည်းလို့လားတော့မသိဘူး။
ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး အဲဒါကူးတောင်ကူးသွားသလိုပဲ။ :P
Jul 30, 2008, 7:10:00 PM
ကျနော် ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်တာ အမြတ်တော်တော်ထွက်တယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ တခုကတော့ တခြားနိုင်ငံကို ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ အသုံးများတဲ့ စကားလုံးတွေကို သိရတာရယ် နောက်တခုကတော့ ကျနော့်လိုပဲ အမ်ဟမ်း ကို အူတော်တော်ယားနေကြသူ မိတ်ဆွေတွေ အများကြီး ရှိနေကြတယ် ဆိုတာကို သိရတာရယ်တွေပါပဲ။ ကွန်မန့်ရေးကြတဲ့လူတွေ အများကြီးဆိုတော့ စတေ့ရှိုးစင်ပေါ်ကနေ အဆိုတော်များ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောသလိုမျိုး ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မပြောတော့ပါဘူး...။ အမ်ဟမ်းးး။ :D အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အိုးအိး အိုအိ :P
Aug 1, 2008, 4:55:00 PM
အမ်ဟမ်း...။ အစ်ကိုရော ဘယ်လိုလဲ :P
Aug 6, 2008, 4:20:00 PM
yes,, aed( lah ) so tar malay nae singapore mhar lu tieakyint fyit nay tae sakar lone par,,,
rita tg,,, malay yauk p ma kyar khin,,aedhabbit ya lar tel,, then,, Italy boss ta yauk naealote lote tau,,aedboss ka sakar pyaw lo,,(lah ) nae sone yin,, suu loon lo,, ma nal control lote yu ya tar